London oo uu Diyaar Garow Xoog Leh ka Jiro, Lana Kala Garan La,a Yahay Daba Joogtii Halgan Dumiyaha iyo Daba Joogtii Dab la Qodhiyaha – Rasaasa News
Say ku Socotiyo Sogor Dihidiyo khaladka Saxda ah waa la Sugayee, Nin sariigtiyo same taliyiyo Saacid dhimayaye, Sun haday tahay seegi maynee, ha saluugine Yaadan saxanine waa Sokeeye sahal ku Af saar “same diidow dabin baa kuu dhigan lagugu dili doonee”.
Waxaa soo yeedhay run iyo been mid ay tahay mooyee in Daa,uud Axmaar oo hogaaminaya raxan ka mid ah raga ay isla shaqeeyaan, uu doonayo in uu yimaado dalalka reer galbeed, gactana mariyo dalal uu is lee yahay waxaa xoog u dagan dadka ka soo jeeda dhulka Somalida Ogadeeniya. Waxay wararku tibaaxayaan in ujeedada ugu weyn ee ay Da,uud Axmaar iyo raxanta la soctaa ay tahay, in ay kulano la yeeshaan dadweynaha Somalida Ogadeeniya ee degan dalalka reer galbeedka.
Waxaan wali cadayn ujeedada dhabta ah ee ay u socdaan, masuuliyiinta ka socda Kaalinka 5aad, waxaase kaliya oo la ogg yahay in Masuuliyiin dhawr Kaalimood ay socaadlo ku marayaan dalal reer galbeed ah, waftiga tirada Kaalinka 5aad waa mid xad dhaaf ah.
Waa markii ugu horeysay ee wafti ka socda Kaalinka 5aad oo tira intan la eg ay u soo kicitimaad dalalka reer galbeedka iyaga oo u socda in ay la kulmaan dadka ka soo jeeda dhulka Somalida Ogadeeniya.
Dadka wax faaleeya waxay isweydiinayaan ujeedada socdaalkooda dhiiri galisay xiligan iyo waliba tirada ay ku socdaan oo aad u badan, ujeedadoodu waxay mid uun noqon kartaa; Khilaafka ururka ONLF oo xalismi waayey keenayna dhiig daata, waxaana faraha ka baxday kalsoonidii uruurka dhexdiisa ahayd iyo waliba rabitaankii ay dadku u hayeen iyo colaad soo kala dhex gashay beelaha ka soo jeeda gabalka ficilada ururka ONLF dartiis. Arinta labaad ee laga yaabo in ay keentay safarka, ayaa loo malaynayaa in garab ka mid ah garabyada ururka ONLF oo baryahan dambe lagu xanto in ay xidhiidh hoose la lee yihiin Itobiya. Arinta saddexaad ee iyadana aad ay ugu malaynayaan dadka la socda arimaha Kaalinka 5aad, ayaa ah in loo raad gadayo lunsasho miisaaniyadii Kaalinka 5aad ee sanadkii tagay.
Xukuumada Itobiya iyo maamulka Kaalinka 5aad ayaa aad u farxay kolkii la dilay Dr. Maxamed Siraad Dolal, waxayna Ideecadaha ka sheegeen maanta wixii ka dambeeya uu gabalku noqon doono nabad galiyo, kolba hadii la dilay nabad diidkii ugu weynaa waa sida ay yidhaahdeen. Hadaalkaas waxaa uu ku fadhiyaa micne weyn kolka laga hadlo safarka Kaalinka 5aad, waayo inta la ogg yahay jiritaanka Kalinka 5aad hore uma dhicin safar kan la mid ah, waxaadna moodaa in ay jirto kalsooni keentay in Kaalinka 5aad u soo badheedho in uu soo booqdo dadweynaha Somalida Ogadeeniya ee sida xooga leh uga soo horjeedi jiray Kaalinka 5aad.
Warar aanu ka dhex helayno dadweynaha Somalida Ogadeeniya gaar ahaan kuwa degan dalka Ingriiska ee aadka u taageera ururka ONLF garabka Jwxo-shiil, ayaa shhegaya in ay wadaan ololeyaal ay doonayaan sidii ay u soo dhaweyn lahaayeen waftiga ka socda Kaalinka 5aad, oo la filayo in ay dhawaan soo gaadhaan Yurub.
Dadweynaha Somalida Ogadeeniya ayaa waxaa ka soo hadhay “dad iyo dhulba lama maleeyo”, waayo dadka ololaha bilaabay ayaa ah dadkii laba todobaad ka hor qaaraanka u uruurinayey shir la is lee yahay waxaa uu ka dhici doonaa todobaadka dambe London, kaas oo loo qabanayo garabka Jwxo-shiil sida la yidhi, laakiin aan la ogayn waxa runta ah ee lagaga hadli doono in uu yahay socdaalka Kaalinka 5aad iyo wax kale.
Ujeedada waftiga, Arinta ugu muhiimsan oo ah in aan cidina wadin danaha dadweynaha, wixii wax loogu qaban lahaana kolkii lagu dhamaysan kari waayey gudaha, in lala soo aado in loogu dalxiis tago dibadaha. Waftigani waxaa la socda baa la lee yahay Tawolde oo ah mulkiilaha Kaalinka 5aad, Cabdi Iley oo aan u baahnayn in laga faaloodo, Cabdifatax Sheekh Cabdulahi horjoogaha Xisbiga Kaalinka 5aad iyo qaar kale oo badan.
Sida ay sheegayaan warar xog ogaal ah, waftigu kolka ugu horeysa waxay tagi dal ka mid ah dalalka Iskandiniifiyanka, lamana oga dhinaca ay ka aadi doonaan, waxaa kale oo aan la ogayn cida ay kala kulmi doonaan kooxda Maxamed Cumar u matasha dalalka reer galbeedka. Waxaase dhab ah in taageerayaalkoodu wadaan dhaqdhqaaq ay ugu diyaar garoobayaan soo dhawaynta waftiga ka socda Kaalinka 5aad, oo sida la filayo ay soo dhawayn doonaan dad badan oo lagu yaqaanay taageerada ururka ONLF.